Banglarchok News Portal – Page 11 – All Type of News Here
ဆီးချိုရောဂါသည်တွေအတွက် ၀မ်းသာစရာဆေးနည်းလေးပါ။ ဆီးချိုဖြစ်တာ နှစ်(၂၀) ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အမေ အခုတော့ ဒီဆေးနည်းလေးနဲ့တွေ့မှ ပျောက်ကင်းသွားတော့တယ်ဗျာ။
admin 07 Jun 2019 34 Views
ဆီးချိုအတွက်​ ဥသျှစ်သီး ဆီးချိုဖြစ်​တာ နှစ်​၂၀ ရှိပြီဖြစ်​တဲ့ အ​မေ​ ​ပျောက်​တဲ့အတွက်​​ ​ဆေးနည်းဒါနပြုတာပါ။ ဤ​ဆေးနည်းကိုဖြန့်​​ဝေပါတယ်​ လိုအပ်​​သော ပစ္စည်းမှာ ရဲယိုရွက်​ နှင့်​ ဥသျှစ်​သီးပါ ။ ” ပြုလုပ်​ပုံ ” ရဲယိုရွက်​ ၉ ရွက်​ နှင့်​ ဥသျှစ်​သီး ၂ လုံး ကို​ ​ရေနှင့်​ပွက်​ပွက်​ဆူ​အောင်​ ကျိုပါ ။ ​ ...
မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆပ်ဖို့အခွင့်အရေးဆိုတာက လူတိုင်းရဖို့လွယ်ကူလှတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်သလို ၊ သား၊သမီးတိုင်းလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေလေးမဟုတ်ပါဘူး ။ အခြေနေနဲ့ကံအကြောင်းတရားရဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်သာ ဒီလိုအခွင့်ရေးမျိုးရှိကြတာပါ ။ တချို့ကျတော့ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ မိဘကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ရခဲ့သလို တချို့ကျရင်လည်း ပူဆွေးသောကတွေနဲ့ မိဘအတွက် တစ်ခုခုကိုစတေးပြီး မိဘကျေးဇူးကိုဆပ်ကြရပါတယ်။ ￼ အဲ့ဒီလိုဆိုအခြေနေတွေထဲမှာတော့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ်ရဲ့သမီးလေး ဇွန်ပြည့်လည်းပါပါတယ်။ အခုဇွန်ပြည့်နဲ့ 8Daysမီဒီယာနဲ့အင်တာဗျူးမှာ သူပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းတွေကို ပြောချင်လွန်းလို့ ပရိသတ်တွေကိုသိအောင်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇွန်ပြည့်က “ အမေ့အခြေနေက အခုတော်တော်လေးတော့ကောင်းလာပါပြီ။ ...
admin 07 Jun 20199Views
￼ ကင်ပွန်းချဉ် ဟာလူတိုင်းစားသုံးသင့်တဲ့ အရွက်တစ်မျိုးပါ။ ကင်ပွန်းချဉ်ကို ဆေးဝါးအဖြစ်စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ အစာလည်းဆေး ဆေးလည်းအစာဆိုသလို ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေ ခံတွင်းမကောင်းသူတွေအိပ်မ ပျော်တဲ့သူတွေ အဓိကစားသုံးသင့်ပါတယ်နော်။ ကင်ပွန်းချဉ်ဟာနွယ်ပင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ပွန်း ချဉ်ဟာအသည်းအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ အရွက်နုကိုကြိတ်ပြီး အသည်းရောင်တဲ့နေရာမှာ လိမ်းပေးပါက လည်းရောဂါသက်သာနိုင်ပါတယ်။ ￼ ကင်ပွန်းချဉ်အရွက်နုကို ညက်အောင်ထောင်ပြီး သကြားအနည်းငယ်ဖြင့် ရေကျက်အေးနှင့် နေ့စဉ်သောက်ပေးပါက အဖျဉ်းရောဂါကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖော ကိုယ်ရောင် ရောဂါတွေကိုလည်း ...
admin 07 Jun 2019 18 Views
ဘယ်တော့မှ မဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၄) ခု… မိန်းကလေး တယောက်က သင့်ကို တကယ် ချစ်မိသွားပြီ ဆိုရင် သစ္စာ ဆိုတာ သင်မတောင်းလည်း သူ့ဖက်ကနေ ပေးပြီးသားပါ ။ သစ္စာရှိပြီး ဘယ်တော့မှ ဖောက်ပြန်မှာ မဟုတ်တဲ့ ချစ်သူကို သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် သင်အရမ်း ကံကောင်း ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့် ချစ်သူ ...
স্টিভ রোডসের জন্য কাজটা বড্ড কঠিন। হাজার হলেও মাতৃভূমি বলে কথা, একটা আলাদা টান তো থাকেই। তবে ইংলিশ এই কোচ পেশাদার বটে। আগেই জানিয়েছেন, আপাদমস্তক ইংলিশ হলেও বাংলাদেশের হয়ে এবার ...
ဆီးချိုရောဂါကို အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ ဆီးဖြူသီး (၁၀) လုံးနှင့် ငါးရံ့ (၁၀) ကျပ်သား။ ￼ တစ်​ပတ်​( ၁)ကြိမ်​ (၃)ကြိမ်​စားပြီးပါက ဆီးချို​ရောဂါ အ​ခြေ​နေကို ပြန်​လည်​စမ်းသပ်​ရန်​ (၆)လခွဲ စွဲစားပါက အမြစ်​ပြတ်​​ပျောက်​ကင်း​ကြောင်း ဖတ်​ရှုရသဖြင့်​ ပြန်​လည်​မျှ​ဝေခြင်းဖြစ်​ပါသည်​ ￼ ( နက္ခတ်​တ္ထ​ရောင်​ခြည်​မဂ္ဂဇင်း)ပါ ​ဆေးနည်း ​ဆေးနည်း ဆီးဖြူသီး (၁၀)လုံးနှင် ￼့ ငါးရံ့ ...
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ… မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီးတော့ အကယ်ဒမီဆုကြီးတွေကိုလည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရဲ့ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ချစ်သက်ကိုမသိတဲ့ သူမရှိပါဘူးနော်။ ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ကျက်သရေရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် သူမဟာ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုလောကမှာ ဟိုးအရင်အချိန်ကတည်းကနေ အခုအချိန်ထိ အောင်မြင်ဆဲ ကျော်ကြားဆဲ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသမီးလေးတစ်လက်ပါပဲနော်။ အခုအချိန်မှာဆိုရင် ချစ်သက်ဟာ ပရိတ်သတ်တွေ အရမ်းကိုလိုချင်နေတဲ့ သာယာကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ အေးချမ်းတဲ မိသားစုကမ္ဘာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိထားခဲ့ပါတယ်နော်။ သူမဟာ ...
တွယ်တာမှုတွေ မရှိအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့ စိတ်ဓာတ်အနေအထားတွေ ခိုင်မာဖို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုဘာနဲ့ လေ့ကျင့်ရမလဲဆိုပြီး မြတ်စွာဘုရားကရာဟုလာကိုပြောတယ်။“ရာဟုလာ တဲ့၊ မင်းရဲ့ စိတ်ကလေးကို မြေကြီး နဲ့ အလားတူအောင်၊ မြေကြီးကဲ့သို့ ခိုင်မာရင့်ကျက်အောင်စိတ်ကလေးကိုလေ့ကျင့်ပါ” တဲ့။ မြေကြီးက ဘာလို့လဲဆိုရင် ဘုန်းကြီးတို့တစ်တွေ မြေကြီးပေါ်မှာ ကောင်းတာလည်းချကြတယ်၊ မကောင်းတာလည်း ချတယ်၊သန့်ရှင်းတာလည်း ချတယ်၊ ရွံစရာတွေလည်းချတယ်။သန့်ရှင်းတာပဲလာလာ ရွံစရာပဲလာလာ မြေကြီးက ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး၊ တည်ငြိမ်တယ်ပေါ့။ ထို့အတူပဲ ...
admin 06 Jun 20195Views
ঈদের দিন ভারতজুড়ে মুক্তি পেয়েছে সালমান খানের নতুন ছবি ‘ভারত’। টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, এর আগে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ে ছবিটির একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ...
admin 06 Jun 20194Views
২০১৯ বিশ্বকাপ পয়েন্ট টেবিল এক নজরে দেখে নেওয়াই যায়। সবগুলো দলেরই অন্তত একটি করে ম্যাচ হয়ে গেছে। কিছু কিছু দল দুটি করে ম্যাচ খেলেছে, খেলছে। দক্ষিণ আফ্রিকা তো তিনটা ম্যাচ ...
admin 06 Jun 20196Views
ভারতের ম্যাচের অধিনায়কত্ব করেন বিরাট কোহলি। দুর্দান্ত সব সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিপক্ষকে চমকে দেন প্রায়শই। তবে শোনা যায় এসব সিদ্ধান্তের পেছনে মহেন্দ্র সিং ধোনির অবদানই নাকি বেশি। শোয়েব আখতারও ধোনির ক্ষমতায় ...
ক্রিকেটের জন্মদাতা তারা অথচ ঝুলিতে কোনো বিশ্বকাপ নেই। ১৯৭৯, ১৯৮৭ ও ১৯৯২ বিশ্বকাপে ফাইনাল অবধি পৌঁছালেও শেষটা সুন্দর করতে পারেনি ইংলিশরা। তবে এবার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখতেই পারেন মরগানরা। একে ...
কোথায় লুকিয়ে ছিলেন সমর্থক
বাংলাদেশের জার্সি গায়ে টিলডা। সংগৃহীত ছবিটিলডা সুইনটনকে সবাই চেনেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী হিসেবে। নার্নিয়া, ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ও অ্যাভেঞ্জার্স মুভির কল্যাণে তাঁর মুখশ্রীও বেশ পরিচিত এখন বাংলাদেশে। বিখ্যাত অভিনেত্রী টিলডা সুইনটন যে ...
admin 06 Jun 20192Views
What is the Amazon Associates Program? Amazon Associates is an offshoot showcasing program that permits site proprietors and bloggers to make connects and procures referral commissions when any of the ...
What is eBay? eBay.com is the most prominent site to purchase and sell products on the web. It’s where people and organizations can purchase or sell new or second-hand things, ...
What is Fiverr.com? Fiverr.com isaworldwide online commercial center which offers errands, administrations, and items, beginning at an expense of $5. Fiverr gets practically 4.7 million visits for each ...